Iibso Yohimbine 30% Awood Aad u Fiican Yohimbe Bark Soosaara Budada - Rar bilaash ah & Cashuur la'aan | WoopShop®
Yohimbine 30% Awood Aad u Yohimbe Bark Soosaara budada
$ 93.99 qiimaha joogtada ah $ 95.99
Color 500g 250g 1000g
Yohimbine 30% Awood Aad u Yohimbe Bark Soosaara budada - 500g gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: Yohimbe Bark Soosaarida Budada
Lambarka Moodalka: KLE028
Yohimbine Hydrochloride waxaa loo muujiyaa inuu yahay mid naxariis badan iyo mydriatic. Waxay u yeelan kartaa firfircooni ahaan afroodisiyam. Awood la'aan (ma awoodo inay kacsato) Qaabka yohimbine u shaqeeyo looma yaqaan hubaal. Waxaa loo maleynayaa, si kastaba ha noqotee, in lagu shaqeeyo iyadoo la kordhinayo soo saarista jirka ee kiimikooyin gaar ah oo ka caawiya soo saarista kacsiga. Uma shaqeyso dhammaan ragga aan tabar darrida lahayn.
Ka ilaali halbowlayaasha inay xirmaan.
Ka hortag wadno xanuun.
Sare u qaad niyadda, yaree welwelka iyo niyadjabka, waxayna kaa caawineysaa dhisidda murqaha.
Daaweynta itaal darrida ragga gaar ahaan tan la xiriirta kaadi macaanka.
Xirmada ma oraneyso waa 30% awood, mana dhigayo qiyaasta marka ay tahay wax soo saar in qiyaaso aad u sareeya ay qatar noqon karto
Ma isku dayin
U rarida Jarmalka 2 bilood Laakiin shanlaha alaabada kastamka waa caadi Qancitaanku waqti dheer ayuu qaadanayaa si kastaba waad ku mahadsantahay waxaan u maleeyay inaysan imaan doonin 2 bilood oo maraakiib ah laakiin waa kadib markii Jarmalka yimid Alaabtu waa wanaagsan tahay